AMERICA - RayHaber | raillynews
America motokari uye ropeway news
PaMutengi weElectronics Show - CES 2020, Fiat yakaratidza iyo itsva uye yemazuva ano magetsi pfungwa Fiat Concept Centoventi. Las Vegas, yepasirese mutengi zvemagetsi zvemagetsi CES 2020 [More ...]
Turkey zvaJehovha Automobile Enterprise Group (TOGG), iri US mudzimba car Las Vegas panguva Consumer Electronics Show rakaitirwa (kumahofisi) akatanga nyika nevoruzhinji. Maererano ruzivo kuzowanikwawo Turkey kuti LinkedIn nhoroondo Cars Initiative Group CEO TOGG [More ...]
Freight Chitima chakakwirirwa muBhazi muMexico 7 Vakafa, 32 Vakakuvadzwa
Mudunhu reSonora, kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweMexico, vanhu vanomwe vakaurayiwa uye makumi matatu nevashanu vakakuvara apo chitima chakatakura vanhu chakayambuka bhazi rakatakura vashandi veMexico Red Cross. Danho kuyambuka muSonora State kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweMexico [More ...]
New Logistics Innovation Center kubva kuDHL
DHL yakavhura yechitatu muzinda muChicago neAmerican Innovation Center kuvandudza mhinduro nyowani dzekuvandudza kwezvinhu zvekushandisa uye zvekutakura. Ratidza kutsunga kwayo kuisa mari mumatekinoroji matsva pamukana wese [More ...]
Freight Chitima Njanji Inoyambuka Rwizi
Ngoro dzezvitima dzekutakurwa muUS dzakatenderera kubva kubhiriji kurwizi. Akataura kuti haana kufa kana kukuvara. Ngoro dzechitima dzakatakura vanhu dzakarova bhiriji muHarper Ferry, Virginia, USA [More ...]
Nei iyo US East-West Railway Yakavakwa?
Kuvaka njanji kwekutanga mhiri kondinendi kwakatanga muUnited States muna 1863 uye ikapera muna Chivabvu 1869. Pfungwa yekuvaka njanji iyi yakaunzwa kuCongress muna 1845 naAsa Whitney. Abraham Lincoln akakosha [More ...]
World Railway Length: Nyika ine refu refu njanji mutsetse ndeye United States of America uye 2014 km zvinoenderana ne293,564 datha. Ipapo mitsetse yepamusoro uye yakareba yenyika [More ...]
Nzira Itsva Yekutengesa! Nhoroondo Yechinangwa kuUSA
Matangi maviri emafuta anoenda kumadokero kweRussia asvika kuChina kuburikidza nemhepo inonyungudika yeArctic. Iyo nzira uye inotakurwa oiri iri meseji kuUnited States. Mvura inodzorwa neUS Navy nenzira [More ...]
Mepu yeSao Paulo Monorail muBrazil
Brazil Sao Paulo Monorail Mepu: São Paulo Monorail, iyo huru monorail system muUnited States, yakavhurwa mu2014, inoshanda pa80 km / h yekushambadzira kwevashandi kumhanya muSao Paulo, Brazil. driverless [More ...]
Mepu yeSao Paulo Metro
Sao Paulo Metro Mepu: Iro Sanro Metro, iyo yakarairwa mu1974, irinjini huru yechitima ine 6 mutsetse uye mutsetse weMonorail. Yakavhura mu2014 mumitsetse [More ...]
Canada's Nhoroondo Brockville Railway Tunnel Inovhurira Tourism
Nhoroondo yeBrockville Railway Tunnel muBrockville, Ontario, Canada yakavhura kushanyira. Iyo tangi, inova njanji yekare kuCanada, yakatanga kuvaka mu1854 ndokuiswa muvhisi mu1860, ine urefu hwe524 mita. [More ...]
Hyperloop Dzidziso Kuzovhurwa na2040
Nhasi, nekuvandudzwa kwetekinoroji, kufambisa kwave nyore uye nekukurumidza. Zvakangodaro, mainjiniya ari kushanda kuti kufamba kuve nyore uye nekukurumidza, rimwe racho riri [More ...]
Huyai maIindasitiri IoT kuNzvimbo Yekugadzira
Industrial analytical solution ine yekunyepedzera njere inogadzira muchina we 4.0 inokonzeresa kugadzirwa uye mhando mhedzisiro Hitachi Vantara, mutsigiri weHitachi Ltd, nhasi unoita shanduko kubva kuhumwe-inotungamirwa ne data. [More ...]